हौसिइन् जाहन्वी - बलिउड - साप्ताहिक
आफुले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र प्रदर्शन नहुँदै हिट भयो भने कुन कलाकारको मन खुसी नहोला ? त्यस्तै भएको छ बलिउड अभिनेत्री जाहन्वी कपुरलाई । चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीकी छोरी जाहन्वीको डेब्यु चलचित्र धडकको ट्रेलर रिलिज भएसँगै जाहन्वीको चर्चा चुलिएको छ ।
२० जुलाईमा प्रदर्शन हुने उक्त चलचित्रको ट्रेलर हेरेपछि धेरैले उनको अभिनयको प्रशंसा गरेका छन् । युट्युबमा उक्त ट्रेलर हेर्नेहरूको संख्या ३७ करोडभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने ट्रेलर हेर्ने जो–कोहीले जाहन्वीको अभिनयमा जादु भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
धडक २०१४ मा प्रदर्शनमा आएको ब्लकबस्टर मराठी चलचित्र सौराटको हिन्दी रिमेक हो । चलचित्र धडक गरिब दलित युवक तथा धनी एवं उच्च वर्गकी युवतीबीचको प्रेममा आधारित छ ।
प्रकाशित :असार २६, २०७५
हिट फ्लपको चक्र
गुपचुप डेटिङ !
पाइलट बन्दै जाहन्वी
जाहन्वीको नजर राजकुमारमा
क्रिकेटरको चक्कर श्रावण ५, २०७६
दीपिकाको समाजसेवा श्रावण १, २०७६
६ महिनाका ६ असार ३१, २०७६
१२ बर्षपछि ‘भुल भुलैया २’ को सिक्वेल असार ३०, २०७६
ताराको पछुतो असार ३०, २०७६
सम्झौताको बाटोमा असार २९, २०७६
अल्पशिक्षित बलिउड स्टार असार २४, २०७६
बलिउडको प्रिय हाइस्लिट असार १९, २०७६
छोरी भइन् भाइरल असार १८, २०७६
अब गीत पनि रिमेक असार १२, २०७६